कम उमेरका युवती यस कारण हुन्छन् बढी उमेरका व्यक्तीतर्फ आकर्षित - Social Video Khabar
कम उमेरका युवती यस कारण हुन्छन् बढी उमेरका व्यक्तीतर्फ आकर्षित
कार्तिक २२ । भनिन्छ, युवतीहरु विन्दास एवं कम उमेरका केटासँग डेट गर्छन् । तर, विवाहका लागि भने आफुभन्दा बढी उमेरकै पुरुष खोज्छन् । यसमा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा पनि गाँसिएर आउँछ । युवतीहरु अपरिपक्क युवासँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न चाहँदैनन् । बरु आफुभन्दा निकै पाको उमेरकासँग उनीहरु राजी हुन्छन् । किन होला त रु
किन होला ?
उस्तै उमेरका युवायुवतीले एक अर्कालाई मनपराउनु वा एक अर्काबीचमा आकर्षण हुनुलाई स्वभाविकै मानिन्छ । तर कहिले काँही उमेरमा ठूलो अन्तर भएका महिला पुरुषबीचमा पनि प्रेमसम्बध देख्न सकिन्छ । अझै विशेषगरी कार्यक्षेत्र वा कार्यालयमा युवतीहरु आफूभन्दा धेरै उमेरका पुरुषहरुतर्फ आकषिर्त भएको देख्न सकिन्छ ।
त्यसैले आजभोली यसलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिँदैन । यसलाई सामान्य कुरा मान्न थालिएको छ । हाम्रै वरिपरि यस्ता धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ जसमा जागिरे महिलाहरु आफ्नो कार्यालयका सिनियर वा हाकिमको प्रेमजालमा फसेका छन् ।
यस्ता सम्बन्धमा रहेका सबै युवतीहरुले उमेरदार पुरुषसँग टिकाउ र स्थायी सम्बन्ध बनाउन चाहेका छन् भन्ने छैन् । कैयौं युवतीहरुले यसै चक्करमा आफ्नो जीवन बर्बाद पनि गर्छन् । यस्तो सम्बन्ध काँचको महलको रुपमा छिटै ढल्छ । कुरा जब विवाहको हुन्छ तब यस्तो सम्बन्धको आधार कमजोर हुन्छ । तर, मानिसको मन पनि अचम्मको हुन्छ । कसैको मनमा कोही बस्यो भने त्यहाँ उमेरको सीमा र जन्मको बन्धनले केही अर्थ राख्दैन ।
धेरै उमेरको अन्तर भएको प्रेमसम्बन्ध त्यति टिकाउ नहुने भएकाले धेरैले यसलाई एकअर्काको कमजोरीलाई उपयोग गरेर आफ्नो फाइदा लिने हतियारको रुपमा पनि लिन्छन् ।किन युवतीहरु आफूभन्दा बढी उमेरका पुरुषको प्रेममा पर्छन् रु यस्ता छन् कारणहरुः
१. सुरक्षाको भाव
कैयौ पटक कम उमेरका युवतीहरु आफूभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । यस्तो अक्सर त्यतिखेर हुन्छ जब कुनै युवती बचपन देखि नै एक्ली हुन्छन् । परिवारमा पिता वा भाई जस्ता पुरुषको संरक्षण नमिलेको कारण उनीहरुलाई अपमान वा दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको हुन्छ ।
यस्ता युवतीहरु सजिलै आफूभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । कैयौंपटक युवतीहरुको यो संकेतको र बाध्यताको फाइदा पुरुषले उठाएको पनि देखिन्छ ।
कार्यक्षेत्रको परिस्थितीले पनि कैयौं पटक यस्तो सम्बन्ध बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् । कैयौं कार्यालयमा फिल्डवर्क हुन्छ । कामको क्रममा युवतीहरु कहिलेकाँही सिनियरहरुसँग कार्यालय बाहिर जानुपर्छ । अनुभव नभएका युवतीहरुलाई यसको फाइदा पुग्छ । विस्तारै विस्तारै युवतीहरु पुरुष सहकर्मीहरुका नजिक आउँछन् । कामको सिलसिलामा लगातार सँगै रहँदा कैयौं पटक मन पनि मिल्छ ।
पुरुषहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि पनि कैयौंपटक कम उमेरका युवतीहरुलाई आफ्नो मोहजालमा फसाउँछन् । युवतीहरुले सहकर्मी भएको नाताले मात्रै पनि पुरुषहरुसँग वार्तालाप गर्छन् भने काममा केही मद्धत माग्छन् । यस्तैमास्वार्थी प्रवृत्तिका पुरुषले यसको गलत फाइदा उठाउने कोसिस गर्छन् र युवतीहरु उनीहरुको जालमा फस्न आइपुग्छन् ।
कैयौं पटक बाध्यताको कारण सँगै काम धेरै उमेरका सहकर्मीको नजिक आउनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर मुख्य कारण बाध्यता हुन्छ सम्बन्धित पुरुषको उमेर होइन । आजभोली धेरै कार्यस्थलमा कामको चाप बढेको छ र समय कम हुन्छ ।
कम समयमा धेरै काम गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नको लागि युवतीहरुले आफ्ना सहकर्मी पुरुषहरुको सहयोग लिन हिच्किचाउँदैनन । यो आवश्यक पनि हुन्छ तर मनलाई के गर्ने रु सहयोग लिँदालिँदा मन पनि एकअर्काको नजिक आउँछन् त्यतिखेर उमेरको बन्धनले कुनै अर्थ राख्दैन ।
प्रलोभन वा लालचको कारणले पनि युवतीहरु उमेर भएका पुरुषहरुको चंगुलमा फस्छन् । कैयौं युवतीहरु धेरै सौखिन र फेसनेबल हुन्छन् । उनीहरुको आवश्यकता धेरै हुन्छ तर आवश्यकता पुरा गर्ने साधन सिमित हुन्छ । यस्तो स्थितीमा यदि कुनै धेरै उमेरको व्यक्ति जो साधनसम्पन्न छन् र पैसाको कमी छैन भने यस्ता युवतीहरु र उनीहरु तर्फ आकषिर्त हुन्छन् । यस समयमा उनीहरुले पछिसम्मको परिणाम देख्दैनन् ।
तत्कालिक लाभ नै उनीहरुको लागि सर्वोपरि हुन्छ । कैयौं युवतीहरु करियरको मामिलामा सर्टकट अपनाउन चाहन्छन् र धेरै ठूलो छलांग लगाएर पदोन्नती प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यही लोभमा उनीहरु हाकिमसँग हिमचिम बढाउँछन् र हाकिमका धेरै उमेरलाई ख्याल नै गर्दैनन् ।
कहिलेकाँही कुनै धेरै उमेरको व्यक्तिले आफ्नो प्रभाव, व्यक्तित्व वा रहनसहनले पनि युवतीहरुलाई प्रभावित बनाउने गर्छ । राजनीति र आर्थिक जगतमा जोडिएका हस्तीहरुको साथमा कम उमेरका युवतीहरु उनीहरुको मोहपासमा बाँधिएका देखिन्छन् ।
यस्ता सम्बन्धले सँधै बर्बाद नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । कैयौपटक यस्तो सम्बन्ध सफल भएको पनि देखिएको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा आपसी सम्बन्ध र परिपक्वताको हो । जहाँ सुझबुझ, विवेक र धैर्यको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो भएमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन् ।
आकर्षण र प्रेममा फरक छ
आकर्षण त मात्रै आकर्षण हुन्छ र धेरै आकर्षण क्षणिक पनि हुन्छन् । टाढाबाट त हरेक चीज आकर्षक देखिन्छन् । त्यसको वास्तविकता त नजिक आएपछि नै थाहा हुन्छ । केयौं पटक यहि आकर्षणले आकाशबाट सिधै धरातलमा ल्याउँछ । आकर्षण प्रेम, चाहना र जीवनभरको साथ सबै फरकफरक कुरा हुन् । आकर्षण र प्रेमलाई एकै सम्झिनु नै गलत हो ।
कुनै राम्रो वस्तुलाई देखेर आकषिर्त हुनु एक सामान्य कुरा हो तर यो आकर्षणलाई जीवनभरको बोझ बनाउन आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै हुन सक्छ। किनभने हरेक चम्किलो चीज सुन हुँदैन । फेरि पनि बदलिँदो समयको आवश्यकता वा बिना मेहनत सफलता हासिल गर्ने होड मा कम उमेरका युवतीहरु धेरै उमेरका पुरुषतर्फ आकर्षित हुनुलाई खासै राम्रो सुरुवात मानिँदैन । यो अज्ञानतामा उनीहरुको भविष्य दाउमै लाग्न पनि सक्छ । एजेन्सी
Prevआजको राशिफल / वि.सं. २०७६ कार्तिक २३ गते शनिबार
Nextलोभ लाग्दो जिउडाल बनाउन यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
मोवाइल बाट यसरी फँसाउछन
महरा प्रकरण : भर्खरै अदालतको यस्तो आदेश !
घरबाहिर एक्लै उभिएको देखेर मोवाइल चोर्न आउनेलाई युवतीले सिकाइन् पाठ (भिडियो)
इटहरीमा सेनाको श्रीमती अर्को सँग सल्केपछि….
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार
यस्ता छोरा बुहारी किन जन्मन्छन यो धर्तिमा
विदेशबाट फर्केर नयाबसपार्कको होटेलमा केटि बोलाउदा आफ्नै बुढी आएपछी बन्यो यस्तो माहोल
हेर्नुहोस दिउसै नयाँ बसपार्कमा खुलेआम यौनधन्दा एसरी हुन्छ मोलतोल
बिहे नहुदै एस्तो हुन पुग्यो…
© Copyright 2016–2019 Social Video Khabar. All rights reserved.